MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနွစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉ်များ နေ့စဉ် ရုပ်သံအစီအစဉ် (ညနေပိုင်း) MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနွစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့
MCN နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၉ ခုနွစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့
မင်္ဂလာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ နေ့စဉ်သတင်း အစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒီကေန ၂၀၁၉ ခုနွစ်၊အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊တနင်္လာနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရရွိထားတဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေး သွားမွာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကေန့မွာ ရှုစားကြရမယ့် သတင်းတွေမွာဆိုရင်တော့ . . .
HL-1 နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ဂပြနျ ဝနျကွီးခြုပျတို့ တှေ့ဆုံတဲ့ သတငျး
HL-2 ပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ခြက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရာမွာ အဂတိကင်းရွင်းဖို့ အထူးလိုအပ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ပြောကြားလိုက်တဲ့ အေကြာင်း
HL-3 မူလတန်းစာပေးစာယူ သင်တန်းတက်ခွင့်ပြုပြီး ကြောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေအဖြစ် အရင်ကအတိုင်း အသိအမွတ်ပြုပေးဖို့ အခြေခံဦးစီဌာနရွိ အထွေထွေလုပ်သား (သင်ကြားရေး) တွေက တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သတင်း
စတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူ အခြားထူးခြားတဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမွာဖြစ်ပါတယ်။
မငျ်ဂလာပါ။ MCN သတငျးဌာနရဲ့ နေ့စဉျသတငျး အစီအစဉျက ကွိုဆိုပါတယျ။ ဒီကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစျ၊အောကျတိုဘာလ ၂၁ ရကျ၊တနငျ်လာနေ့ အတှကျ နောကျဆုံးရရှိထားတဲ့ သတငျးတှကေို တငျဆကျပေး သှားမှာ ဖွစျပါတယျ။ ဒီကနေ့မှာ ရှုစားကွရမယျ့ သတငျးတှမှောဆိုရငျတော့ . . .
HL-1 နိုငြငြံတြော အတိုငပြငခြံပုဂျဂိုလနြဲ့ ဂပွနြ ဝနကြှီးခွုပတြို့ တှေ့ဆုံတဲ့ သတငြး
HL-2 ပှညသွူတှရေဲ့ လိုအပခွကှကွို ဖှညွ့ဆညွးဆောငရွှကရွာမှာ အဂတိကငွးရှငွးဖို့ အထူးလိုအပတွယလွို့ ရနကွုနတွိုငွးဒသကှေီး အစိုးရအဖှဲ့က ပှောကှားလိုကတွဲ့ အကှောငွး
HL-3 မူလတနျးစာပေးစာယူ သငျတနျးတကျခှငျ့ပွုပွီး ကြောငျးဆရာ၊ ဆရာမတှအေဖွစျ အရငျကအတိုငျး အသိအမှတျပွုပေးဖို့ အခွခေံဦးစီဌာနရှိ အထှထှေလေုပျသား (သငျကွားရေး) တှကေ တောငျးဆိုလိုကျတဲ့ သတငျး စတဲ့သတငျးတှနေဲ့အတူ အခွားထူးခွားတဲ့ ပွညျတှငျးသတငျးတှကေို တငျဆကျပေးသှားမှာဖွစျပါတယျ။
Previous articleပြည်သူတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်ရာမှာ အဂတိကင်းရှင်းဖို့ အထူးလို
Next articleMCN နေ့စဉ် နိုင်ငံတကာ သတင်းအစီစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့